Qaramada midoobay oo gargaarkii ugu horeeyay geysay Yemen | Hangool News
Qaramada midoobay ayaa gargaarkii ugu horeesay ka dejisay dekedda ay maamulaan Xuutiyiinta ee ku taala waqooyiga dalka Yemen, kadib markii ay dowladda Sacuudiga ay qafiifisay xayiradii ay kusoo rogtay dalkaasimuddo saddex toddobaad kahor.Yemen ayaa qarka u saaran macluul, waxaana hakintii howlaha gargaarka ay keentay walaac horleh.
Maraakibtan siday daqiiqda ayaa kusoo xirtay dekedda magaalada Hodeidah ee wadanka Yemen , taasi oo aan la barbar dhigi karin baahida ka taagan gudaha Yemen.
Malaayiin qof oo ku sugan gudaha dalka Yamen ayaa la daalaa dhacayaa dhibaatooyin ay kamid yihiin baahi iyo caafimaad darro.
Waxaana gargaarkan hadda la geeyay dalkaasi la rumeesanyahay inuu habayaraatee wax ka tari doona baahida ka taagan gudaha Yemen, maadaama haatan dib loo furay dekedda.
Hey’adaha gargaarka ee ka howgala Yemen ayaa rajeynaya in dib u furida dekedda ay horseedi doonto in dalkaasi la geeyo gargaar dheeraad ah.
Abeer Etefa oo ah afhayeenka hey’adda cunnada adduunka ee WFP oo ka hadashay xaaladda dalkaasi ka taagan iyo baahida loo qabo gargaarka deg deg ah ayaa sheegtay in dalkaasi uu qarka u saaranyahay macluul.
Image captionCaruurta dalka Yemen oo ay saameysay xayiraadda lagu soo rogay dalkaasi
Sidookale madaxa hey’adda badbaadad carurta UNICEF ee bariga dhexe iyo waqooyiga qaarada Afrika, Mr Geert Cappelaere oo ka walaacsan xaaladda caruurta ee dalkaasi ayaa sidookale BBC-da u sheegay in dhibaatooyinka bani’iaadanimo ee ka taagan dalka Yemen ay saameysay inta badan dadka kunool Yemen, gaar ahan Caruurta.
Dadka qaar ayaa qabo in bixinta gargaarka la geeyay Yemen uu qaadan doono muddo.
Dowladda Sacuudiga ayaa xayiraad kusoo rogtay wadanka Yemen, kadiib markii Xuutiyiinta Yamen ay Gantaal ku soo rideen magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga, taa oo dhalisy in xukuumadda Riyadh ay qaado talaabooyin saameyn ku yeeshay dadka rayidka ah.
Xulafada Sacuudiga ayaa dagaal kula jira xuutiyiinta ay taageerto dowladda Iran, waxaana taasi ay horseeday in dalka Yamen uu noqdo mel ay ku hardamaan Sacuudiga iyo Iran.